Kismaayo News » Ciidamada Qaranka oo qaaraan loo uruurinayo
Ciidamada Qaranka oo qaaraan loo uruurinayo
Kn: Madaxda ugu sareysa dalka ayaa si wadajir ah uga qeyb qaatay barnaamij lagu taageereyey ciidamada Qaranka oo uu soo qaban-qaabiyey xafiiska ra’iisul wasaaraha, islamarkaana dhaqaale loogu uruurineyey ciidamadda qalabka-sida.
Waxana munaasabadda ka hadlay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xassan Cali Khayre, Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi C/laahi iyo masuuliyiin kale oo dhamaantood qiray sida ay lagama maarmaan u tahay in bulshada Soomaaliyeed ay gacantooda ku dhistaan ciidamadda qaranka, si looga baxo baahida uu dalkeenu u qabo ciidan difaaciisa u taagan.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey munaasabadda ayaa tilmaamay in maanta ay tahay maalin qaali ah oo dadkeenu ka shaqeynayaan dhismaha ciidankooda, isagoo soo xiganaya taariikhda ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu ra’iisul wasaaruhu sheegay in ciidamadda Africa ugu tayada iyo tirada fiican ay kamid ahaayeen ciidankeenu, hadana wadajir iyo isku tashi lagu gaari karo in dib loo yagleelo ciidamadaasi.
“Ciidankeenu wuxuu lahaa cudud adag, wuxuu lahaa tababar fiican, wuxuu lahaa niyad fiican, wuxuu lahaa waxyaabo aanay laheyn ciidamada afirika oo ah geesinimo iyo dhiiranaan adag oo ilaalhay siiyey. Wuxuu kaalin ka geystay olohihii hirgelinta Af-Soomaaliga ee sanadkii 1974-kii, sidoo kale waxay gurmad u fidiyeen dadkii ay ku dhacday abaartii dabadheer oo ciidankeenu muujiyey qiimaha ay shacabkiisu leeyihiin”ayuu yiri ra’iisal wasaaraha oo intaas raaciyey.
“Maanta waxaan nahay dal dhan oo aan lahayn ciidan dhisan oo hadduu cadowgu ku soo duulo markuu rabo qabsan karo. Waxaanu nahay dal idil oo difaaciisa cirka, badda iyo berigaba ay ka dayacan yihiin. Calanku ma taagnaan karo oo cirka kama babban karo haddaanu ciidan ku tiirsanayn, kalsoonida bulshadu ma dhismayso haddii ayan ku hurdin ciidan difaaca, cadowgu ma soo hunguriyeysanayo ciidda dal leh ciidan daryeelan oo cudud iyo tayo leh ayuu raaciyey.
Ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay in ummadi aysan gaari karin midnimo iyo horumar haddii aanay leheyn ciidan ay u baxsato waqtiyada adag, isla markaana uusan dal nabadgelyo iyo xasillooni sugan ku naaloon karin haddii aanu lahayn ciidan heegan ah. Sida kaliya ee dhibkaas looga bixi karana ay tahay isku tashi, dhamaanteenna loo baahan yahay inaan u istaagno dhismaha ciidankeena, si aan ula tartanno wadamada nalamidka ah.Wuxuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in lagu taageero ciidanka qof walba wixii uu awoodo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo oo gunaanadkii munaasabadda ka hadlay ayaa ugu baaqay bulsho weynta Soomaaliyeed in ay ka soo qeyb qaataan dhismaha ciidanka qaranka, wuxuna hoosta ka xariiqay in dhaqaalaha ay soo uruuriyaan uu geli doono gacan aamin ah oo gaarsiin doonta ciidamadda u taagan difaaca dalkooda.